Disclaimer - Filankevitry ny morontsiraka afovoany
Fanekena sy fanekena ny fepetra ankapobeny
Ity tranokala ity dia an'ny Cleanaway 1Coast (fantatra ankehitriny hoe "The Organisation"). Ny fidiranao amin'ity tranokala ity dia miankina amin'ny fanekenao sy ny fanarahanao ny fepetra, ny fepetra, ny filazana ary ny fandavana voarakitra ato amin'ity antontan-taratasy ity. Ny fampiasanao sy/na ny fidiranao amin'ity tranokala ity dia ny fanekenao ho voafatotry ireto fepetra ankapobeny ireto. Ny Fikambanana dia manana zo hanitsy ireo fepetra ankapobeny ireo amin'ny fotoana rehetra.
Ny fitaovana aseho ato amin'ity tranokala ity, ao anatin'izany tsy misy fetrany ny fampahalalana rehetra, lahatsoratra, fitaovana, sary, rindrambaiko, dokam-barotra, anarana, logos ary marika (raha misy) ato amin'ity tranokala ity ("Vatiny") dia arovan'ny zon'ny mpamorona, marika ara-barotra ary ara-tsaina hafa. lalàna momba ny fananan-tany raha tsy voalaza mazava.
Tsy tokony hanova, handika, hamoaka, hamoaka indray, hametaka, hampiditra amin'ny olon-kafa, handefa, handefa na hizara ity votoaty ity amin'ny fomba rehetra ianao afa-tsy izay nahazo alalana an-tsoratra avy amin'ny Fikambanana.
Azonao atao ny mijery ity tranokala ity amin'ny alàlan'ny navigateur web anao ary mitahiry kopia elektronika, na manonta dika mitovy amin'ny ampahany amin'ity tranokala ity ho an'ny fampahalalana anao manokana, fikarohana na fandalinanao, fa raha toa ianao ka mitazona ny votoaty rehetra tsy tapaka sy amin'ny endrika mitovy. arak'izay aseho ato amin'ity tranokala ity (ao anatin'izany tsy misy fetrany ny zon'ny mpamorona, ny marika ara-barotra ary ny filazana fananan-tany hafa ary ny dokam-barotra rehetra).
Tsy tokony hampiasa ity tranokala ity na ny fampahalalana ato amin'ity tranokala ity ianao amin'ny fomba rehetra na amin'ny tanjona tsy ara-dalàna na amin'ny fomba rehetra izay manitsakitsaka ny zon'ny Fikambanana na izay voararan'ny fepetra ankapobeny.
Dokam-barotra sy rohy mankany amin'ny tranokala hafa
Ity tranokala ity dia misy rohy mankany amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo. Ireo tranonkala mifandray ireo dia tsy eo ambany fifehezan'ny The Organisation, ary ny Organisation dia tsy tompon'andraikitra amin'ny votoatin'ny tranonkala mifandray na izay hyperlink misy ao amin'ny tranokala rohy. Ny Organisation dia manome ireto rohy ireto ho anao ho fanamorana fotsiny, ary ny fampidirana rohy rehetra dia tsy midika hoe fankatoavana ny tranokala mifandray amin'ny The Organisation. Mampifandraisina amin'ny tranokala toy izany ianao amin'ny risikao manokana.
Disclaimer sy famerana ny andraikitra
Ny fampahalalana voarakitra ato amin'ity tranokala ity dia nomen'ny Fikambanana amin'ny finoana tsara. Ny vaovao dia azo avy amin'ny loharanom-baovao inoana fa marina sy ankehitriny araka ny daty voalaza ao amin'ny fizarana tsirairay amin'ity tranokala ity. Na ny Fikambanana na ny tale na ny mpiasa ao aminy dia tsy manome solontena na antoka momba ny fahamendrehana, ny fahamarinany na ny fahafenoan'ny fampahalalana, ary tsy manaiky ny andraikitra rehetra mipoitra amin'ny fomba rehetra (anisan'izany ny tsy firaharahiana) amin'ny fahadisoana, na ny tsy fisian'ny, ny vaovao. Raha misy entana na serivisy omena na atolotry ny Fikambanana na ny iray amin'ireo tale na mpiasa ao aminy, ny andraikitra amin'ny fanitsakitsahana ny fiantohana na fepetra tsy azo esorina dia voafetra amin'ny safidin'ny Fikambanana:
a) ny famatsiana entana (na entana mitovy aminy) na serivisy indray; na
b) ny fandoavana ny saran'ny fananana ny entana (na entana mitovy aminy) na ny tolotra omena indray.
Ireo fepetra ankapobeny ireo dia fehezin'ny lalàn'i New South Wales, Aostralia. Ny fifandirana mipoitra avy amin'ireo fepetra ankapobeny ireo dia amin'ny voalohany dia miankina amin'ny fahefan'ny fitsarana any Nouvelle-Galles Atsimo, Aostralia. Ny Fikambanana dia manana zo hanao fanovana amin'ity tranokala ity amin'ny fotoana rehetra.